အောင်လ အတွက် ထူးထူးခြားခြား အားပေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်လိုက်တဲ့မင်းရာဇာ - Cele GabarCele Gabar
အောင်လ အတွက် ထူးထူးခြားခြား အားပေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်လိုက်တဲ့မင်းရာဇာ
Published: April 3, 20191:01 pm Updated: 1:05 pm
ဆယ်လီကမ္ဘာ ပရိသတ်ကြီးရေ၊ မင်းရာဇာကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနက်အားပေးမှုကိုရရှိနေတဲ့ စွယ်စုံရအနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နယ်ပရိသတ်တွေတခဲနက်အားပေးခဲ့ရတဲ့ အနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ့ရဲ့ ဘဝကိုအဓိကပုံဖော်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့မင်းရာဇာကတော့ အနပညာလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ အနပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မင်းရာဇာတစ်ယောက် နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်းကို အားပေးချင်တဲ့အတွက် တကူးတက ကချင်မြေကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ မင်းရာဇာက “ညီလေးအောင်လရေ ချစ်လွန်းအားကြီးလို့ မင်းရဲ့မွေးရပ်မြေထိကိုသွားပြီးအားပေးနေတယ် မင်းရဲ့နောက်မှာမြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိတယ်။ အောင်!!! လ!!! အန်!!! ဆန်း!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” ဆိုပြီး လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေတဆင့်ရေးသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆယ်လီကမ္ဘာ ပရိသတ်ကြီးရေ၊ အောင်လအန်ဆန်းအတွက် ကချင်ပြည်နယ်အထိသွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ မင်းရာဇာအတွက် မှတ်ချက်ကနေ တစ်ခုခုပြောခဲ့ကြပါဦး ။
Source – Min Yar Zar
အောငျလ အတှကျ ထူးထူးခွားခွား အားပေးမှုတဈခု ပွုလုပျလိုကျတဲ့မငျးရာဇာ
ဆယျလီကမ်ဘာ ပရိသတျကွီးရေ၊ မငျးရာဇာကတော့ ပရိသတျတှရေဲ့တခဲနကျအားပေးမှုကိုရရှိနတေဲ့ စှယျစုံရအနပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး နယျပရိသတျတှတေခဲနကျအားပေးခဲ့ရတဲ့ အနပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူတှရေဲ့ ဘဝကိုအဓိကပုံဖျောတဲ့ ဇာတျကားတှနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ရငျထဲကိုရောကျရှိလာတဲ့မငျးရာဇာကတော့ အနပညာလောကမှာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ ရပျတညျနနေိုငျတဲ့ အနပညာရှငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။
မငျးရာဇာတဈယောကျ နိုငျငံ့ဂုဏျဆောငျ အားကစားသမားတဈယောကျ ဖွဈတဲ့ အောငျလအနျဆနျးကို အားပေးခငျြတဲ့အတှကျ တကူးတက ကခငျြမွကေိုသှားရောကျခဲ့တယျလို့လညျးသိရပါတယျ။ မငျးရာဇာက “ညီလေးအောငျလရေ ခဈြလှနျးအားကွီးလို့ မငျးရဲ့မှေးရပျမွထေိကိုသှားပွီးအားပေးနတေယျ မငျးရဲ့နောကျမှာမွနျမာတဈနိုငျငံလုံးရှိတယျ။ အောငျ!!! လ!!! အနျ!!! ဆနျး!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” ဆိုပွီး လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါကနတေဆငျ့ရေးသားဖျောပွထားတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ဆယျလီကမ်ဘာ ပရိသတျကွီးရေ၊ အောငျလအနျဆနျးအတှကျ ကခငျြပွညျနယျအထိသှားရောကျအားပေးခဲ့တဲ့ မငျးရာဇာအတှကျ မှတျခကျြကနေ တဈခုခုပွောခဲ့ကွပါဦး ။
Previous Previous post: နေတိုးနဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ Travel Blogger နုမြတ်
Next Next post: နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲ ဖြစ်လာဦးမယ့် မော်ဒယ်လ် ထက်ဦးထွဋ်
ပါးစပ်မပါဘဲ အရမ်းစကားပြောတဲ့ ဂြိုလ်သားတစ်ကောင်ကို အလင်းပြလိုက်တဲ့ အေသင်
Published: March 21, 20194:09 pm
Ah Boy ရဲ့လေးစားဖွယ်စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးစကားဆိုလိုက်တဲ့ တေးရေး ရွှေဂျော်ဂျော်
Published: March 16, 201911:53 am
မွေးနေ့မှာ ပရိသတ်ကို ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့ ကြက်တောင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ
Published: March 15, 20194:33 pm
မွေးနေ့မှာ ပရိသတ်တွေကို မျက်ရည်ကျစေခဲ့တဲ့ ကော်နီရဲ့ သီချင်းလက်ဆောင်တစ်ပုဒ်
Published: December 21, 201812:57 pm
မိန်းမချော ကာရိုက်တာ ပေါက်သွားတော့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ ရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းကြတယ်ဆိုတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်
Published: March 30, 20196:50 pm Updated: 7:02 pm
ချမ်းချမ်းကို တရားဝင်ကွာရှင်းခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့ ဘုန်းသိုက်
Published: April 19, 201912:51 pm Updated: April 20, 20199:37 am
လူမှုကွန်ရက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ခင်လှိုင်သမီးလေး သဇင်ထူးမြင့်
Published: January 3, 20191:07 pm
(၂၀၁၈)ခုနှစ် အတွက် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တစ်သက်တာ ထူးချွန်ဆု ဆုရ ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်
Published: March 23, 20197:11 pm
ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးတာဝန်ရှိသူတွေကို မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ ထိရှစေလိုက်တဲ့ နေထူးနိုင်
Published: April 3, 20195:29 pm
နေရောင်အောက်ကနေ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အသည်းတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေအောင် ပြုစားလိုက်တဲ့ ပိုင်တံခွန်
Published: December 4, 20182:39 pm
Ways to InstillaMindset of Gratitude in Your Child
Published: January 15, 201911:10 am
Published: February 21, 201711:15 am Updated: March 18, 20199:38 am
Published: December 4, 20184:35 pm